Mianara Dingana Forex Trading Amin'ny dingana, Varotra Forex ho an'ny beginners Guide 2020
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Mianara dingana ara-barotra Forex
Ahoana no fiasa forex? Fepetra fototra ho an'ny fifanakalozana Forex Dingana amin'ny fifanakalozana ara-barotra Forex
Misafidy ny mety broker
Ianaro ireo teny tena ilaina
Sokafy kaonty demo
Mifidiana rindrambaiko mpivarotra
Safidio ny mpivady vola
Andramo ny paikady ara-barotra sasany
FAQs varotra Forex Famaranana
Amin'ireo zavamaneno maro momba ny fampiasam-bola, ny varotra Forex dia fomba iray mahasarika hampiakatra ny renivohitra mora anao. Raha ny fanadihadiana nataon'ny Bank for Central Settlement (BIS) tamin'ny taona 2019, dia nilaza ny antontan'isa fa nahatratra $ 6.6 trily tapitrisa dolara isan'andro ny varotra amin'ny tsenan'ny FX tamin'ny aprily 2019, tafakatra $ 5.1 trily tapitrisa taona talohan'izay.
Ahoana ny fomba fiasan'izany rehetra izany, ary ahoana no ahafahanao mianatra forex dingana amin'ny dingana?
Ao amin'ity torolàlana ity dia hamaha ny fanontaniana rehetra momba ny forex ianao. Ka io, andao hanomboka.
Ahoana no fiasa forex?
Ny varotra varotra dia tsy mitranga amin'ny fifanakalozana toy ny entam-barotra sy tahiry, fa tsena tsy miova izay misy varotra roa mifanakalo mivantana amin'ny alàlan'ny mpivarotra. Ny tsenam-bola forex dia mandeha amin'ny alàlan'ny tambajotra banky. Ny foibem-barotra forex faharoa lehibe indrindra dia New York, London, Sydney ary Tokyo. Azonao atao ny mivarotra 24 ora isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Misy karazany telo ny tsenam-bola forex izay ahitana ny tsenam-bola forex, futures forex futures ary ny forex market tsapany.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra manombatombana amin'ny vidin'ny forex dia tsy mikasa ny handray ny vola; fa manombatombana ny faminaniana momba ny fifanakalozana dia manararaotra ny fihenam-bidy amin'ny tsena.
Ny mpivarotra Forex dia manombatombana tsy tapaka amin'ny vidin'ny fiakaran'ny vidin'ny mpivarotra vola mba hahazoana ny tombony.Fs, ohatra, ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny EUR / USD dia manondro ny salan'isa eo anelanelan'ny Euro sy ny US Dollar. Izany dia nipoitra avy amin'ny fifandraisana eo amin'ny famatsiana sy ny tinady.
Ny fepetra fototra amin'ny varotra forex
Efa notanterahinao ny fototra lehibe indrindra handraisana anjara amin'ny fifanakalozana Forex raha manana solosaina sy fifandraisana Internet.
Ankehitriny ianao manana ny fahalalana ilaina eo amin'ny tsenan'ny Forex dia andao isika handroso mankany amin'ny fomba ahafahanao mianatra Forex varotra dingana amin'ny dingana.
Dingana amin'ny varotra forex
Alohan'ny hanombohana ny fifanakalozana ara-barotra, misy zavatra vitsivitsy mila dinihinao aloha. Ireo dingana ireo dia ampahany amin'ny dingan'ny fianaranao.
1. Misafidy ny mety broker
Mifidy ny broker havanana no dingana tena ilaina amin'ny varotra forex satria tsy afaka manao varotra an-tserasera ianao raha tsy manana broker ary misafidy mpivarotra diso dia mety hiafara amin'ny traikefa ratsy amin'ny asanao.
Tokony ho azonao antoka fa manolotra sarany mora, mpanelanelana tsara mpampiasa ary indrindra indrindra, ny mpivarotra kaonty demo.
Miaraka amin'ny kaonty demo, azonao fantarina na mifanentana aminao na tsia ny broker. Io dia mamela anao hanandrana sy handinika tsara ny paikady forex.
Raha misy olona te hanome anao na maniry hanolotra izany amin'ny fomba tena mahatezitra, tokony miahiahy ianao. Manoro hevitra tsara ianao hitodika any amin'ny sehatra iray naorin'ireo manampahefana ao amin'ny firenena niaviany.
2. Ianaro ireo teny tena ilaina
Mila mianatra mianatra teny manokana ianao alohan'ny hanombohanao ny dianao. Ireto ny fehezanteny tokony hianaranao hahatakatra.
Ny tahan'ny dia manondro ny vidin'ny mpivarotra vola ankehitriny.
- Vidin'ny bid
Ny vidiny iray atolotry ny FXCC (na fety hafa) mividy mpivady vola amin'ny mpanjifa. Ny vidiny dia hatonina ny mpanjifa rehefa te-hivarotra (handeha fohy) amin'ny toerana iray.
- Manontany vidiny
Izy no vidiny izay amidy, na fitaovana amidy amin'ny FXCC (na fety hafa). Ny vidin'ny fangatahana na tolotra dia mandaitra ny vidin'ny mpanjifa hotononina rehefa te hividy (handeha lava) toerana izy ..
- Mpivady vola
Ny fifanakalozana ara-bola foana no atakalo tsiroaroa, ohatra, ny EUR / USD. Ny vola voalohany dia ny sandam-bola, ary ny faharoa dia ny sandam-bola. Izany dia mampiseho hoe ohatrinona ny sandam-bola takiana hividianana ny sandam-bola.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny bid sy ny fangatahana dia antsoina niely.
Ny fizotry ny fanombanana ny tabilao amin'izao fotoana izao mba hahafahanao milaza hoe aiza no hihetsika amin'ny tsena.
- Kaomisiona / sarany
Io ny saram-barotra amina mpivarotra toa ny FXCC isaky ny varotra.
- Filaharan'ny tsena
Ny baikon'ny tsena dia miankina amin'ny vidin'ny ankehitriny napetraky ny tsena. Raha manome baiko na varotra toy izany ianao, dia ho afaka hiditra amin'ny varotra haingana araka izay azo atao.
- Mametra ny filaminana
Ny kaomandy voafetra dia ahafahan'ny mpivarotra mametraka fetra voafetra vola tsiroaroa vidiana na amidy. Io dia mamela ny drafitra ifanakalozana ambaratonga sasantsasany ary hialana amin'ny vidin-tsolika lafo na fivarotana vidiny mora loatra.
- Kaomandy fanakanana fatiantoka
Miaraka amin'ny baikon'ny fampiatoana dia mety manamaivana ny fahaverezan'ny mpivarotra ny mpivarotra raha mifanohitra amin'ny vidiny ny vidiny. Natao ny baiko rehefa tonga ny vidin'ny mpivarotra iray. Ny mpivarotra dia afaka mametraka fijanonana mandritra ny manokatra varotra na afaka mametraka izany na dia aorian'ny fanokafana ny varotra aza. Ny baiko fampiatoana dia iray amin'ireo fitaovana fototra hitantanana ny loza.
Ny fampiasana azy dia ahafahan'ny mpivarotra mivarotra volabe lehibe noho ny avelan'ny renivohitra. Mihabetsaka ny tombony azo fa mihamitombo koa ny loza.
Raha varotra forex, ny mpivarotra dia takiana ampahany kely amin'ny renivohitra fotsiny hanokatra sy hitazona ny toeran'ny varotra. Ity ampahany amin'ny renivohitra ity dia antsoina hoe marge.
Pip dia singa fototra amin'ny varotra forex. Izy io dia manondro ny fiovan'ny vidin'ny mpivady vola. Ny pip dia mifanaraka amin'ny fiovan'ny làlana 0.0001 XNUMX XNUMX.
Ny betsaka dia midika 100,000 unitan'ny vola fototra amin'ny varotra forex. Ny brokers maoderina dia manolotra lotony mini miaraka amin'ny 10,000 unit sy micro micro miaraka amin'ny unit 1,000 ho an'ny mpivarotra manana renivohitra ambany.
- Tsiroaroa hafakely
Ny mpivady exotic dia tsy amidy matetika amin'ny "majors". Raha tokony ho izy dia marefo vola, fa afaka mitambatra amin'ny EUR, USD, na JPY. Noho ny rafitra ara-bola tsy miovaova, ny mpivady vola sandoka toy izany matetika dia mihamalemy kokoa noho ny an'ny majres izay miorina amin'ny ankapobeny.
Ny boky dia fitambaran'ny mpivarotra mpivarotra vola iray. Indraindray koa dia raisina ho toy ny fitambaran'ny fifanarahana ara-barotra mandritra ny andro ..
- Mandehana lavitra
Ny hoe "mandeha lavitra" dia midika hoe mividy mpivarotra vola izay miandry ny fiakaran'ny vidin'ireto mpivady vola ireto. Ny filaharana dia mahazo tombony raha miakatra ny vidin'ny ambonin'ny vidin'ny fidirana.
- Mandehana fohy
Fivarotana vola sandoka dia midika fa manantena ianao fa hihena ny vidin'ny mpivady vola. Ny filaharana dia mahazo tombony raha mihena ny vidin'ny vidin'ny fidirana.
- Tsy misy kaonty fifanakalozana
Miaraka amin'ny kaonty tsy misy swap dia tsy mandoa ny sarany rollover ny tompon'andraikitra amin'ny fihazonana toerana misy varotra mandritra ny alina.
- Kaonty mahazatra
Manome kaonty isan-karazany ny fivarotana broker forex izao. Raha tsy mila fepetra takiana manokana ianao dia tazomy ny kaonty mahazatra.
- Kaonty Mini
Kaonty mini dia ahafahan'ny mpivarotra forex mivarotra mini-lot.
- Kaonty Micro
Ny kaonty micro dia ahafahan'ny mpivarotra forex ny varotra micro-lot.
- Fifanakalozana fitaratra
Ny varotra fitaratra dia ahafahan'ny mpivarotra mandika ho azy ny automanton'ny mpivarotra mahomby amin'ny vidim-bola sasany.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny famenonana tena izy sy ny vidin'ny famoahana antenaina dia antsoina hoe slippage. Matetika mitranga ny fahatapahana raha toa ka mora miova ny tsena.
Scalping dia fomba fifanakalozana fotoana fohy. Ny vanim-potoana eo anelanelan'ny fanokafana sy ny fanidiana ny varotra dia mety miovaova segondra vitsy ka hatramin'ny minitra vitsy.
3. Sokafy kaonty demo
Manoro hevitra izahay a kaonty demo ahafahanao manandrana mivarotra forex tsy misy risika. Noho izany, afaka mahazo ny traikefa FX voalohany tsy misy risika ianao.
Ny kaonty demo dia miasa toy ny a kaonty tena izy miaraka amina fampiasa voafetra. Eto dia manana vola virtoaly azonao ampiasaina amin'ny varotra ianao.
4. Mifidiana rindrambaiko mpivarotra
Ny brokers sasany dia manolotra ny vavahadin-tseraseran'izy ireo amin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraseran'ny tranonkala tokana, saingy ireo brokers FX hafa dia manome anao rindrambaiko na fampiharana manokana. Ny ankamaroan'ny brokers manohana ny malaza MetaTrader varotra plaform.
Raha mampiasa Internet amin'ny alàlan'ny browser tsy dia mahazatra loatra ianao, dia tokony hihevitra ianao fa tsy manohana izany ny broker FX anao. Mba hahafahanao mifanakalo amin'ny varotra Forex, mila mampiasa fampiharana iray amin'ity tranga ity ianao - na mametraka ny iray amin'ireo browser mahazatra amin'ny solosainao.
5. Safidio ny mpivady vola
Ny varotra Forex dia natao ao vola tsiroaroa ihany. Noho izany, tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe iza no mpivady vola hividianana azy. Amin'ny maha-fitsipika azy dia misy ny olo-mahay sy ny zaza tsy ampy taona. Ny mpifaninana sandam-bola malaza indrindra angamba EURUSD, USDJPY, ary EURGBP.
6. Andramo ny paikady ara-barotra sasany
Ny paikady forex iraisana dia tokony misy teboka efatra:
famaritana famantarana famaritana
fitantanana ny risika
ny fivoahana amin'ny varotra.
Misafidiana paikady momba ny varotra izay mety aminao indrindra.
Ireto misy zavatra mahazatra varotra paikady:
Amin'ny antsoina hoe "scalping", ny andraikitra dia mihazona manokana mandritra ny fotoana fohy. Toy ny fitsipika, manidy ny varotra izy ireo ao anatin'ny minitra vitsy ny fisokafan'izy ireo. Afa-po amin'ny fivarotana ambany isaky ny varotra ny mpivarotra rehefa mivadika. Ny famerimberina tsy tapaka dia mety hitarika fiverenana avo amin'ny fotoana lava.
- Fifanakalozana andro
In andro varotra, mivoha sy mihidy ao anatin'ny iray andro ny varotra. Ny mpivarotra andro dia manandrana mahazo amin'ny fiovan'ny fotoana fohy amin'ny tsena forex mikorontana be.
- Varotra varotra
Ny varotra mitsoka dia modely varotra maharitra mandritra ny roa andro ka hatramin'ny herinandro maromaro ny mpivarotra ary manandrana mahazo tombony ambony indrindra amin'ny fironana iray izy ireo.
- Fifanakalozana toerana
Amin'ny fifanakalozana varotra, ny mpivarotra dia manaraka ny fironana maharitra mandritra ny fotoana maharitra mba hahatsapa ny mety ho farany avy amin'ny hetsika vidiny.
FAQs varotra Forex
Ilaina ve ny mampiasa vola amin'ny Forex?
Tahaka ny mety ho matihanina rehetra, dia misy foana ny risika very rehefa mivarotra Forex. Tsy maintsy manangana paikady momba ny varotra forex mety amin'ny toetranao ianao. Ireo izay manam-pahaizana amim-pahendrena dia afaka mahazo fiverenana avo amin'ny fifanakalozana ara-barotra forex.
Inona no sehatra tsara indrindra amin'ny varotra forex?
Ny fisafidianana ny sehatra dia mitombina ary miankina amin'ny takian'ny varotra. Ny sasany amin'ireo fanta-daza Sehatra fifanakalozana Forex Anisan'izany MetaTrader 4 ary MetaTrader 5. Tsy ny sehatra varotra rehetra no maimaim-poana. Ankoatra ny sarany miverimberina isam-bolana, ny sehatra sasany dia mety hiparitaka bebe kokoa ihany koa.
Sarotra ny hahita fahombiazana amin'ny fifanakalozana ara-barotra forex?
Tsy misy isalasalana fa mila be loatra ny fomba hahazoana vola amin'ny varotra forex. Ho fanampin'ny fisafidianana ny mpivady vola tsara dia ilaina ny fiofanana tsy tapaka amin'ny lasa mpivarotra forex mahomby.
Ny varotra forex an-tserasera dia mampanantena famerim-bola be ho an'ny mpampiasa vola nefa mitaky be avy amin'izy ireo. Ireo izay vonona hiomana amin'ny varotra forex an-tserasera fotsiny ary hiatrika be dia be amin'ny paikady ara-barotra forex no tokony hiditra ao amin'ny tsenam-bola forex.
Miaraka amin'ireo torohevitra noresahina etsy ambony dia vonona ianao hanana ny traikefanao forex voalohany ary afaka manomboka manomboka mianatra ny varotra forex ianao.